I-Casita epholileyo embindini wePalm Desert - I-Airbnb
I-Casita epholileyo embindini wePalm Desert
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguAthena
Icasita entle ekumgangatho ophezulu w / yokungena yabucala ebekwe kwindawo ezolileyo yemizuzu kude neTrader Joes, indawo yokutyela yase-El Paseo kunye nesithili sokuthenga, iindlela ezidumileyo zokuhamba intaba, iLiving Desert Zoo, kunye neCivic Centre Park. I-Keurig eneepods ezincomekayo, i-wifi, i-Smart TV, intambo, iziteshi zemuvi, kunye nomoya wabucala ophakathi. Ukufumana isaphulelo kwimihla ekhoyo, okanye ukubuza umnxeba: 760 emva koko 808 emva koko 7219. Pet friendly, bona iinkcukacha ngezantsi! Zive ukhululekile ukubhalela kwi-instabook, ukufowuna, okanye ukubhala ngemibuzo.
Siyathandana nezilwanyana. Kukho ixesha elinye i-$ 30 yomrhumo wokusingatha izilwanyana eziya kuqokelelwa xa ufika. Sicela ukuba izilwanyana zasekhaya zingashiywa zingajongwanga ngaphandle kwi-patio. Kukho ipaki yenja engaphantsi kwekhilomitha ukusuka eCivic Centre Park.
Xa ufika, paka phambi kwendlu kwaye ungene ngokungena kwakho kwangasese kunye nendlela yokuhamba. Bukela izibane zelanga zikhanya njengoko usiya ngasemva kwipropathi apho uya kungena kwi-casita yakho ngepatio yakho yabucala kunye nendawo yokuhlala enomthombo kunye nezibane ezikhanyayo zelanga. Iingcango zaseFransi zivuleleka ukubonisa igumbi lokulala elihle nelipholileyo. Yonke into, kubandakanywa ne-casita ngokwayo, yintsha kraca kwaye yakhelwe ukuba ibe yindawo yabucala yokuthuthuzela nokuphumla. Ikhitshi, itafile yababini, iTV, kunye nearmoire zigqibezela indawo yokuhlala encinci kodwa etofotofo. Igumbi lokuhlambela lahlulwe kwigumbi eliphambili ngomnyango wobumfihlo kwaye ishawari inkulu kwaye ibanzi. Akukho kungena phakathi kwendlu enkulu kunye ne-casita. Iyunithi yokufudumala kunye nomoya kuphela ye-casita kwaye ayilawulwa yindlu enkulu. Umgangatho we-casita yikonkrithi emdaka kwaye yinto yokuqala ebonwa ziindwendwe zethu. Umgangatho uyilelwe ukusinceda ukuba sigcine indawo icocekile kwaye ingabina-allergen kangangoko.
Sinedesika encinci yeofisi kunye nesitulo esifumanekayo ngokwesicelo sakho ukuba ufuna indawo eyongezelelweyo yomsebenzi kunye nomphunga omileyo ofumanekayo xa uceliwe. Sazise nje.
Ummandla wethu ozolileyo ukwindawo ephambili yeNtlango yePalm. Ungahamba uye kuTrader Joes. Ngaphakathi kwe-1/2 yeemayile unokunyuka i-Bump n Grind Trail, uye kwiimuvi, ufumane indlela enkulu yokukhwela ibhayisekile, ivenkile e-El Paseo, i-Westfield Mall, okanye uMlambo; ungadla kwi-PF Changs, i-Cheescake Factory, i-Stuft Pizza, i-Red Lobster, i-Yardhouse, i-Olive Garden, i-Five Guys, i-Spaghetti Factory, okanye i-Market's Market; ungafumana izinto eziyimfuneko eWalmart, Whole Foods, Walgreens, Trader Joes, okanye Target. I-Civic Centre Park ebanzi ikwangaphakathi kwe-1/2 yeemayile. Imizuzu eyi-15 ukuya e-Indio. Imizuzu engama-20 ukusuka edolophini yasePalm Springs.
Umbuki zindwendwe ngu- Athena
Siyavuya ukuqalisa incoko xa iindlela zethu ziwela; kunjalo, sithanda ukunika iindwendwe zethu indawo. Sihlala kwindlu enkulu ngokusisigxina kwaye sifumaneka nanini na xa sifuneka ngombhalo okanye umnxeba.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Palm Desert